I-FAQ Ye-TOFRE Heat Herbal Sticks - Sichuan King Continental Blotechnology Co. Ltd.
1.Ngingayithenga kanjani imikhiqizo ye-TOFRE?
Asinawo umsebenzi wokuthengisa ngokuqondile wemakethe yomhlaba.Uma unentshisekelo ngemikhiqizo yethu futhi ufuna ukuzama, ungashiya imininingwane yakho yokuxhumana bese uyithumela kithi ngekhasi elithi Thintana nathi, noma uxhumane nozakwethu bokusabalalisa basendaweni emhlabeni wonke ukuze uthenge.
2.Buyini ubuchwepheshe be-TOFRE?
Isisekelo Socwaningo Nokuthuthukiswa sochungechunge lwemikhiqizo ye-TOFRE konke kusekelwe ekhonweni eliqinile lelabhorethri yethu lokuqamba emisha yemithi.Inhloso yethu yasekuqaleni ukuhlanganisa ubuchwepheshe bemithi ekhishwe ezitshalweni zemvelo, nomuthi wamaphaphu ukuze sakhe indlela enempilo yokubhema kwababhemayo.
Uma uthanda, sicela ubheke ukwethulwa okuningiliziwe kwemikhiqizo yethu ukuze uthole isimiso semikhiqizo ethile.
1.Iyini i-TOFRE HEAT HERBAL Stick
I-TOFRE Heat Herbal Stick iwumkhiqizo omusha sha wamakhambi, esiwudalela ababhemayo (Ukushisa-ukungashi).Uma kuqhathaniswa nezinti zikagwayi ze-HNB, i-TOFRE Heat Herbal Stick isungula ifomula enempilo ye-herbal fuse izinga lobuchwepheshe lokunambitha ugwayi yenze ibe ifaneleka ekubhemeni futhi ibe nempilo.Ngaphezu kwalokho, sifaka ukuqhuma kwebanga likagwayi othini.Ngemuva kokuqeda ukuqhuma, uzoqala uhambo oluhle lokubhema, futhi uthole ukunambitheka okungcono kwemikhiqizo kagwayi ye-HNB....shush!Lona umlingo womkhiqizo we-TOFRE.Futhi i-TOFRE Heat Herbal Stick ingashintshwa ngokuphelele kuwo wonke amadivayisi okushisa emakethe.
2.Yini ubuchwepheshe be-TOFRE Heat Herbal Sticks?
Isakhiwo se-TOFRE herbal stick sithathwe kumgomo wethu we-honeycomb wemvelo wemvelo Ngokuhlanganisa indlela "yesakhiwo", "i-microwave", "i-microbiology", "ikhemikhali yokudla", "i-low-temperature puffing" kanye nobunye ubuchwepheshe bokuqala.
Inzuzo eyinhloko yesakhiwo sethu ukuthi sinciphisa ingozi yokubangela ukusabela kwamakhemikhali okungadingekile ezintweni ezingavuthiwe, okwenza i-TOFRE igcine ukunambitheka kwasekuqaleni kwefomula yethu yemithi ngokwezinga eliphezulu.
Isakhiwo sekhekheba lezinyosi se-TOFRE esakheke ngokwemvelo, esixegayo&esijwayelekile sivumela ukushisisa ukuthi kube nokulinganisela futhi ngeke kuwise noma iyiphi i-slag kudivayisi.Ngaphezu kwalokho, ubuchwepheshe besakhiwo be-TOFRE bungathuthukisa ukusebenza kahle kokudluliselwa ngokushisisa, okulethela ababhemayo be-HNB umuzwa wokubhema oshelelayo.
3.Ingabe i-TOFRE Heat Herbal Sticks inamaqabunga kagwayi?
I-TOFRE Heat Herbal Stick ayinazo izithako zikagwayi.Umuzwa wangempela wokubhema usekelwe kufomula yezithako zemithi engu-100%, kanye nobuchwepheshe bokunambitha ugwayi obamukelwa ama-Flavorists ethu, kanye ne-nicotine yemvelo emsulwa ukuze kubuyiselwe umuzwa wokubhema ngezinga elikhulu kakhulu.
Uma kuqhathaniswa nemikhiqizo engashisi eyenziwe ngezinto zokusetshenziswa zeqabunga likagwayi, i-TOFRE Heat Herbal Stick enezithako zamakhambi ahlanzekile iyinketho yokubhema enempilo.
4.Ingabe i-TOFRE Heat Herbal Sticks iqukethe iNicotine?
I-Nicotine iyinto encike kakhulu kubo bonke ababhemayo, i-TOFRE iyafana, ngeke siyekethise ku-nicotine.Ngakho-ke, sihlinzeka ngomkhiqizo wokubhema ngokwaneliseka okuphezulu, ukunambitheka okuhle kakhulu kanye nengozi ephansi kunogwayi.Uma kuqhathaniswa nogwayi wendabuko, sehlise ubungozi ngo-95% ngendlela encomekayo.
5.Iziphi izithako ze-TOFRE Herbal Sticks?
Izithako ze-TOFRE Herbal Sticks zonke zisekelwe emithonjeni yemvelo nephephile, izithako ezingezansi:
Itiye, Mint, Vegetable Glycerin, Natrual Spice, kanye neNikotini Yemvelo.
6.Iyiphi i-HNB Heat Device engasebenza ku-TOFRE Heat Herbal Sticks?
I-TOFRE Herbal stick ekhethekile ye-ultra-microcellular Herbal Technology isivumela ukuthi sijwayelane nawo wonke amadivayisi ajwayelekile we-HNB Heat emakethe.Ngesikhathi esifanayo, maduze sizokwethula idivayisi ekhethekile yokushisa ye-tofre ukuze ihambisane nenduku yethu.